Ku laabo usbuuca kulamadan cajiibka ah ee Android | Androidsis
Toddobaad cusub ayaa bilaabmaya kaas oo, si sax ah, waa usbuuca ugu dambeeya ee Luulyo. In badan oo idinka mid ah ayaa durbaba xirxiraya boorsooyinkaaga si ay u galaan fasax; kuwa kale, xitaa, waxaan diyaarinaynaa dhalashadeena, oo dhici doonta, inta ka horeysana, waxaa jira kuwa bilaabaya inay murugoodaan maxaa yeelay waqtigooda nasashada ayaaba bilaabay inuu dhammaado. Waxaad ka tirsan tahay kooxda aad ka tirsan tahay, barnaamijka 'Androidsis' waxaan dooneynaa inaan kula joogno, waxaanan ku sameynaa sida ugu wanaagsan ee aan ku ogaanno sida, adiga kugula talinaya ciyaaro cusub si aad ugu raaxaysato gebi ahaanba.
Toddobaadkan waxaan ku bilownay xamaasad. Dhawr saacadood ka hor ayaanu kugu wargelinay sida loogu guuleysto Galaxy S8 Plus gebi ahaanba bilaash, oo hadda waxaan kugula talineynaa taxane ciyaaro ah si aad u bilowdo toddobaadkan cusub oo buuxa, tamar, farxad ama, xaalada ugu xun, inaad ka baxsan karto xaqiiqda intaad ku raaxeysaneysid inaad ciyaaro qaar ka mid ah taleefannadaada casriga ah. Marka, haddii aad halkan timaaddo oo aanad haysan wax ka wanaagsan oo aad ku dhaqaaqdo, kuwan waa soo-jeedimahayaga loogu talagalay ciyaaraha si loo bilaabo usbuuca lugta midig.
1 Minecraft: Habka sheekada - Xilliga Labaad
2 Nasiib darro 13 - Nasashada ciyaarta halxiraalaha ah
3 Muuqaalka 'Vector Pop'
Minecraft: Habka sheekada - Xilliga Labaad
Waxaan ku bilaabanay qaab caadi ah oo dhan, si wanaagsan, dhab ahaantii waxaannu la bilaabannay muuqaal aad u cusub maxaa yeelay "xilligan labaad" ee ciyaarta dhismaha caanka ah Minecraft ficil ahaan uun ka soo muuqday Play Store.
Minecraft: Habka sheekada - Xilliga Labaad Waa ciyaarti udambeysay ee ugu dambeysay ee ay soosaaraan Ciyaaraha Telltale oo, sidii lafilaayay, waxaa sifiican usoo dhaweeyay shacabka, inkasta oo, sida iska cad, astaamaha xirashada iyo jeexitaanka ciyaartan ay durbaba bilaabeen inay muujiyaan.
Qaybtan labaad ee Minecraft: Mode Story, Jesse wuxuu sii wadaa inuu noqdo halyeeyada sheekada; hadda noloshu waa wax "ka sii murugsan", oo xilal badan ka buuxa. Gacanta Jesse waxaa ku xayirnaa gacmo gashi qarsoodi ah oo cabsi badan, isaga iyo asxaabtiisii ​​hore iyo asxaabtiisa kale ee cusub, waa inuu gashaa safar cusub oo tacabur ah oo ay ka buuxaan caqabado iyo tijaabooyin adag oo laga gudbo.
Guud ahaan, ciyaartu waxay la timid qaar ka mid ah arrimaha waxqabadka, laakiin laga yaabee in khasaaraha ugu weyni uu yahay qiimihiisa. Cutubka koowaad ee sheekadan waxaa lagu qiimeeyay € 5,49 inaad bixinayso haddii aad rabto inaad soo dejiso ciyaarta oo aad bilowdo ciyaarta. Halkaasna, waxaad sidoo kale bixin doontaa lacag si aad ugu hormariso cutub kasta oo cusub. Laakiin ha iloobin, waa Minecraft, mid ka mid ah ciyaaraha ugu guulaha badan sanadihii la soo dhaafay.
Nasiib darro 13 - Nasashada ciyaarta halxiraalaha ah
"Nasiib darro 13" waa a ciyaarta xujo iyo nasasho kaas oo loo soo bandhigo isku darka labada ciyaarood ee caanka ah, Tetris iyo Threes. Farsamooyinka ciyaarta way fududahay: waxaad ubaahantahay inaad koox koox uguxirto adigoo ku saleynaya midabkooda shabakad horeyba ugujirtay baloogyo midabbo leh oo nambarro ay kujiraan Haddii baloogyo badan oo isku midab ah ay u dhigmaan oo nambarku gaadho saddex iyo toban, waad lumineysaa. Sidaa darteed, waxaad ku dari doontaa baloogyo aan dhammaad lahayn oo la tirtiri doono marka xariiq lagu dhammaystiro shaashadda, iyadoo la adeegsanayo Tetris.
Waa ciyaar xariifnimo iyo sidoo kale ciyaar caadi ah, oo leh a naqshad wanaagsan, waxqabad wanaagsan oo wanaagsan, kaas oo kaa madadaalin doona saacado iyo saacado maxaa yeelay, sida asalka ah ee aan horay u soo sheegnayba, runtii waa balwad.
Nasiib-darro 13 - Ciyaarta Halxiraalaha ah ee Nasashada waa ciyaar bilaash ah oo xayeysiis ah oo xayeysiis ah oo aad kula bixi karto hal iibsi oo ka mid ah barnaamijka gudahiisa haddii aad rabto.
Developer: wadarta qorrax madoobaad
Muuqaalka 'Vector Pop'
Waxaanan gaarnay soo jeedinteenii seddexaad ee ciyaarta si aan usbuuca ugu buuxino "Vector Pop", a ciyaar orodyahan aan dhammaad lahayn taas oo aad noqon doontid saddexagal saddex geesle ah oo la tartamaya saddexagal kale iyo marka aad jidka ku sii jirto, waa in aad soo ururisaa walxo badan oo leh qaab laba jibbaaran, haa, oo leh dhib xawaare aad u weyn.
Waxay ku saabsan tahay ciyaar "aad u 90s" ah, oo 90s midab leh iyo 2s 90D muuqaallo muuqaal ah, taasoo kuu soo celin doonta xusuus wanaagsan qaarkiin laakiin taas oo si fiican idiinku madadaalin doonta muddo dheer, iyadoo aan loo eegayn da'daada.
"Vector Pop" waa ciyaar bilaash ah oo xayeysiis ah oo xayeysiis ah oo aad ku saari karto iibsiga abka. Waxay kaloo leedahay iibsasho kale oo ikhtiyaari ah oo lagu iibsado nolol ama mawduucyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Laad-bilow usbuuca kulamadan cajiibka ah ee Android